နေသားတကျ – Grab Love Story
မင်းဆွေနွယ်က သူမထက် အသက်နှစ်နှစ်ခန့်ကြီးပြီး မင်းမျိုးနွယ်ဟု ခေါ်သော သူမနဲ့ အသက်ရွယ်တူခန့်ရှိသူ ညီတစ်ယောက်ရှိသည်။ ညီမဖြစ်သူ ငွေစင်ကတော့ အသက် ၂၀ခန့်သာရှိသေးပြီး တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်ကို တတ်ရောက်သင်ကြားနေသည်။ အိမ်ဖော်များမရှိပဲ လူလေးယောက်သာနေသော အိမ်တွင် လူတစ်ယောက်လျော့သွားသည်က အလွန် သိသာ လွန်းသည်။ ရက်လည်နေ့မို့ အသုဘအိမ်တို့ထုံးစံအတိုင်း ဖဲရိုက်မည့်သူ မရှိတော့သလို ညစောင့်မည့်သူတို့လဲ မလာတော့။ ညီမဖြစ်သူ ငွေစင်ပင် ပင်ပန်းစွာ အိပ်စက်နေပြီထင်။ ရွှေစင်ကတော့ ထမင်းစားခန်ူမှာ ကော်ဖီတစ်ခွက်ရှေ့ချပြီး ငိုင်နေမိသည်။ ရွှေစင် မအိပ်သေးဘူးလား အသံကြောင့် သတိဝင်ကာ လှည့်ကြည့်တော့ မင်းမျိုးနွယ်။ သြော် ကိုမျိုး အင်း အိပ်မရသေးလို့……. ။ မင်းမျိုးက ခေါင်းငြိမ့်ပြကာ -ငါ့ကော်ဖီတစ်ခွက်လောက် ဖျော်ပေးပါလား…… မင်းမျိုးက သည်အတိုင်းပင် ။ ကိုယ့်ပါကို ဘယ်တော့မှမလုပ် သူများကို အဲ့လို အကူအညီတောင်းတတ်သည်။ ရွှေစင်လည်း ခေါင်းငြိမ့်ပြပြီး သူ့ကို ကျောပေးကာ ကြောင်အိမ်ထဲက ကော်ဖီထုတ်ကို ယူကာ ဖျော်ပေးလိုက်သည်။ နောက်သူမလည်း သူမကော်ဖီကို အကုန်သောက်ကာ မက်းမျိုးနဲ့ စကားစဖြတ်ပြီး အိပ်ရန်ပြင်သည်။ သို့သော် စကားပြောနေရင်းခေါင်းက တရိပ်ရိပ်မူးလာသည်။ ရှေ့မှာ မြင်နေရသော မင်းမျိုးရဲ့ ပုံရိပ်တွေပင် ပျက်သားလာလိုက် ဝေဝါးသွားလိုက်……။ နောက်တော့ သူမ ထိုင်ရက်ပင် လောကကြီးနဲ့ အဆက်အသွယ်ပျက်သွားသည်။
ကျွတ်….ကျွတ်….ကျွတ်…… နိုးလာတော့ ခေါင်းက ငြီစီစီ ဖြစ်နေစဲ ။ ညက ဘာတွေဖြစ်သွားမှန်း ရွှေစင်မသိ။ အိပ်ယာမှထပြီး အနေအထားပျက်နေသော အင်္ကျီနဲ့ထဘီကို ဆွဲဆန့်ကာ နာရီကြည့်ဖို့ ဖုန်းကို ဖွင့်လိုက်သည်။ ဟင် ဒေါက် Lock Screenမှာတင်ထားတဲ့ ပုံကြောင့် မင်သက်ကာ ဖုန်းပင်လက်ထဲက လွတ်ကျသွားသည်။ နောက်မှ သတိပြန်ဝင်လာကာ ဖုန်းကို ဖွင့်ပြီး galleryထဲဝင်ကြည့်တော့ ပို လန့်သွားသည်။ ပုံတွေ အများကြီး….။ သူမရဲ့ ဝတ်လစ်စလစ်နဲ့ မဖွယ်မရာပုံတွေ။ စဉ်းစားရင်း ညက သူမရုတ်တရက်မူးကာ မေ့သွားသည်ကို သတိရလာသည်။ ထို့ကြောင့်ဖုန်းကိုယူကာ အိမ်အောက်သို့ကမန်းကတန်းဆင်းလာသည်။ မနက် ကိုးနာရီ ထိုးပြီမို့ ငွေစင်တစ်ယောက်တော့ ကျောင်းသွားနေလောက်ပြီ ။ သူမ ထမင်းစားခန်းထဲဝင်တော့ မောင်းမင်းကြီးသား မင်းမျိုးနွယ် ကော်ဖီသောက်နေတာကိုတွေ့သည်။ သူမကို မြင်တော့ ထိုင်နေရာမှ မတ်တပ်ထကာကြည့်သည်။ ရွှေစင်လဲ သူနဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်ရပ်ကာ ဖုန်းကို ထောင်ပြလိုက်သည်။ မင်းမျိုးနွယ်က သူမကို မထီတရီကြည့်ကာ ဘာလုပ်လို့လဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာလေ…. ။ ဟုပြောပြီး သူ့ဖုန်းကို လှုပ်ပြသည်။ သူ့ဖုန်းထဲမှာလဲရှိတယ် ဆိုတဲ့သဘော……။ ရွှေစင် ဒေါသက စောင့်ထွက်လာသည်။ ဖြန်း…… မင်းမျိုးနွယ် မျက်နှာ တစ်ဖက်လှည့်သွားသည်။နာကျသွားသော ပါးကို လက်ဖဝါးတစ်ဖက်ဖြင့်ပွတ်ကာ ခပ်မဲ့မဲ့ပြုံးလိုက်သည်။
ရိပ်ကနဲ လက်ဝါးကို မြင်လိုက်ပေမဲ့ ရွှေစင်မရှောင်လိုက်နိုင်……။ ဖြောင်းကနဲအသံနဲ့အတူ သူမ ပြစ်လဲကျသွားသည်။ သူမမထနိုင်ခင် မင်းမျိုးက သူမလက်နှစ်ဖက်ကို လက်ပြန်ဆွဲလိမ်ကာ သူအသင့်ယူထားသော တိပ်နဲ့ လက်ကောက်ဝတ်နှစ်ဖက်ကို တုပ်ချည်လိုက်သည်။ နင်….နင်….ငါ့ကို ဘာလုပ်နေတာလဲ ခုလွှတ်စမ်း….. ဝူး…ဝူ….ဝါး သူမအော်ဟစ်တော့ ပါးစပ်ကို ပါတိပ်နဲ့ကပ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့သူမကို ဆွဲတူကာ စတိုခန်းဘက်ကို ဆွဲခေါ်သွားသည်။ မဟုတ်လဲ တရွတ်တိုက်အဆွဲခံရမည်မို့ သူမအလိုက်သင့်လေးလျှောက်သွားရင်းရုန်းကန်နေသည်။ မင်းမျိုးကသူမကို စတိုခန်းထဲတွန်းသွင်းလိုက်ယာ ပုံရက်သားလေးလဲကျသွားသည်။ လက်ပြန် ချုပ်နှောင်ခံထားရသည်မို့ တော်တော်နှင့်ပြန်မထနိုင်။ မင်းက သွေးပူနေတော့ စကားပြောလို့ရဦးမှာ မဟုတ်ဘူး ဒီတိုင်းခဏနေလိုက်ဦးပြီးမှ ပြန်လာခဲ့မယ် ပြောပြီး တံခါးပိတ်ကာ အပြင်က သော့ခတ်လိုက်သည်။ ရွှေစင် လဲနေရာမှလူးလဲထကာ တံခါးကို ကိုယ်နဲ့ပြေးတိုက်သည်။ ဒုန်းကနဲအသံမည်သွားပေမဲ့ တုတ်တုတ်မျှမလှုပ်။ နောက်တော့ မောဟိုက်ကာ တံခါးဘေးမှာ ပင်ဒူးထောက်ကျသွားသည်။ တစ်စတစ်စ ဒေါသတွေပြေသွားမှ အိမ်ရဲ့တိတ်စိတ်မှုကို သူမသတိထားမိသည်။ မင်းမျိုးလဲ အပြင်ထွက်သွားပြီထင်သည်။ သာမာန်အချိန်ဆို အကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့ နှောင်ကြိုး အတုပ်ခံထားရတော့ အားငယ်စိတ်ကဝင်လာသည်။ သူမရုန်းကန်မိသည်။
သို့သော အထပ်ထပ်တုပ်ထားသော တိပ်တွေက ခိုင်လွန်းသည်။ နောက်တော့ ကြမ်းပြင်ပေါ်ခွေခွေလေစလှဲချကာ ငိုကျွေးမိတော့သည်။ သူမအခန်းထဲ အပိတ်ခံထားရတာ အတော် ကြာပြီ အပြင်မှာ ဘယ်နှနာရီတွေရှိနေမှန်းမသိ။ ဗိုက်အတော်စာနေပြီ။ လက်နှစ်ဖက်ကလဲ အချိန်တောတော်ကြာအောင် ချုပ်နှောင်ခံထားရသည်မို့ ညောင်းကိုက်နေသည်။ ကျွီကနဲ တံခါးဖွင့်သံကြောင့် ရွှေစင်မော့ကြည့်လိုက်သည်။ မင်းမျိုးကို တွေ့တော့ အသနားခံသလိုကြည့်မိသည်။လက်ရှိမိမိဘဝက သူလက်ခုပ်ထဲကရေမှတ်လား။ မင်းမျိုးက သူမအနား စောင့်ကြောင့်ထိုင်ချကာ ဖုန်းကလေးကို လက်ညိုးလက်မနဲ့ ကိုင်ပြီး သူမအနားကပ်ကာ……. ဒီထဲမှာ ဘာတွေရှိလဲ သိတယ်မှတ်လား သူမ ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်သည်။ ငါ… အဲ့တာတွေကို အွန်းလိုင်းတင်လိုက်ရမလား….. ရွှေစင် မျက်ရည် တလည်လည်နဲ့ခေါင်းခါပြလိုက်သည်။ သူမကို ကြည့်ပြီး မင်းမျိုးက ခနဲ့သလိုရယ်သည်။ အေးအဲ့တာဆို မိုက်မိုက်မဲမဲတွေ မလုပ်နဲ့ ကြားလား…. သူမခေါင်းငြိမ့်ပြရသည်။ သူက ပြန်ထွက်သွားကာ ထမင်းနဲ့ရေဘူးယူလာပေးသည်။ နောက်သူမလက်ပေါ်က တိပ်တွေကို ဓားနဲ့ ဖြတ်ကာ သူမကို ထမင်းစားစေသည်။ သူကတော့ အခန်းတံခါးပိတ်ကာ အပြင်ပြန်ထွက်သွားငည်။ ရွှေစင်ထမင်းစားပြီးတော့ နေရာမှထကာ ခုခံစရာ ပစ္စည်းတစ်ခုတလေရှိမလား ရှည့်ကြည့်သည်။ ဘာမှမရှိ တုတ်တိုတုတ်စလေးပင်မရှိ။ ထိုသို့မရှိအောင်လဲ မင်းမျိုးနွယ်က ကြို ရှင်းထားသည်။
ဘာမှမတွေ့တော့ ရွှေစင်တစ်ယောက် မျှော်လင့်ချက်မဲ့သွားသလိုခံစားရသည်။ ပိုပြီးစိတ်အားငယ်မိသည်။ ဒေါက်….ဒေါက်….ဒေါက် တံခါးခေါက်သံကြောင့်သူမနားစွင့်မိသည်။ အသံတော့မပေး။ အထဲက ဟာမ အသံကြားလား ကြားကြားပါတယ်ရှင့်…….. အေးကြားရင် တံခါးနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်နံရံဘက်လှည့်ပြီး ဒူးထောက်နေ ၊လက်တွေကိုလဲ ခေါင်းနောက်ပစ်ထား ကြားလား ဟုတ်ကဲ့ ဟု အကြောင်းပြန်ပြီး သူခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုပ်ရသည်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်က အနိုင်ကျင့်သမျှ ငြိမ်ခံနေရသည်ဟူသော အသိက သူမကို ဝမ်းနယ်စေသည်။ မင်းဆွေက တံခါးမှရှိတဲ့ အပေါက်ငယ်လေးထဲက ချောင်းကြည့်နေပြီး သူလိုချင်တဲ့အနေအထားရောက်မှတံခါးဖွင့်ကာ အထဲဝင်သွားသည်။အထဲမှာ ဏွှေစင့်ရဲ နှစ်လိုဖွယ်နောက်ပိုင်းအလှကို ငေးကြည့်နေသည်။ ပြီးတော့ ယူလာသော ကြိုးခွေကို ပစ်ချလိုက်ရာ ဘုတ်အယကနဲအသံကြောက့်ရွှေစင်ကိုယ်လေး ဆက်ကနဲတုန်သွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။နောက်ယူလာတဲ့ ကျဉ်စက်ကလေးနဲ့ လည်ဂုတ်ဝင်းဝင်းလေးကို တို့လိုက်ရာ အမေ့ကနဲညည်းသံနဲ့အတူ ကြမ်းပြင်ပေါ် အရုပ်ကြိုးပျက်ကလေးလဲသွားသည်။ လူက အရမ်းမောဟိုက်နေပြီး မလှုပ်ချင်အောင်ဖြစ်နေပြီ။ ကြည့်ပါဦး ကူရာကယ်ရာမဲ့နေလိုက်တာ သနားစရာလေးပါးလား…။ ဟု ခနဲ့သလို ပြောသည်။ ရွှေစင်ကတော့ တဟင့်ဟင့် ငိုရိုက်နေသည်။ နောက်သူက ရွှေစင့်ကို ထိုင်ရက်သားဖြစ်အောင်ဆွဲထူလိုက်ပြီး ယူလာတဲ့ ကြိုးနဲ့ လက်ပြန်တုပ်နှောင်လိုက်သည်။ လက်မောင်းနှင့် ရင်ဘတ်တို့ကိုပါတုပ်နှောင်ထားရာ အနည်းငယ်မျှ မလှုပ်နိုင်အောင်တင်းကျပ်နေသည်။
မင်းမျိုးက ကပိုကရို ကျနေတဲ့ ရွှေစင့်ဆံပင်တွေကို ကပိုကရိုပင်ဆံထုံးလေးထုံးပေးလိုက်သည်။ သွား…နင့်အိပ်ခန်းကို…… ဟု အမိန့်ပေးက သူမကို ရှေ့ကသွားစေလျှက် သူကနောက်မှလိုက်သည်။ ရှေ့က အထိတ်တလန့်နဲ့သွားနေတဲ့ ကောင်မလေးကိုကြည့်ပြီး မင်းမျိုးပြုံးဖြစ်သည်။ လှလိုက်တာ…..။ နဂိုလှနေတဲ့ မိန်းကလေး ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် ကြိုးတွေနဲ့ တုပ်ထားတော့ သနားဖွယ်ရာ လှနေသည်။ အကိုဖြစ်သူရှိကတည်းက သူမကို စိတ်ဝင်စားကာ အပိုင်လိုချင်ခဲ့တာ အခုတော့ အကို လုပ်သူလည်းမရှိတော့ ။ မလည်မဝယ် သင်းတို့ညီအမကို သူအပိုင်သိမ်းတော့မည်။ အိပ်ခန်းထဲရောက်တော့ သူမတို့လင်စုံမယားဖက်အိပ်ခဲ့တဲ့ ခုတင်ခြေရင်းက ဘောင်ပေါ် ရင်ဘက်ကိုတင်ပြီး ဖင်ကုန်းခိုင်းထားသည်။ သူမအရှေ့က ခုတင်ပေါ်မှာ ကြိမ်လုံးတစ်ချောင်း။ မင်းမျိုးက သူမထဘီကို လှန်တင်လိုက်သည်။မလုပ်ပါနဲ…… ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်း ကောင်မ ကျင်စက်စာမိချင်လို့လား ခြိမ်းခြောက်သံပြောင့် သူမငြိမ်လိုက်မိသည်။ သူက သူမရဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ဆွဲခွတ်လိုက်သည်။ ရှက်လိုက်တာလေ…..။ သူမ ဖုံးကွယ်အပ်သောအလှတရားဟာ သွယ်စင်းသော ပေါင်တံတွေကြားပြူးနေမှာသေချာသည်။ သူက ကြိမ်လုံးကို ကောက်ကိုက်လိုက်တာ မြင်တော့ ရွှေစင်ထိတ်ကနဲဖြစ်သွားသည်။ မိထွေး အိမ်ကထွက်လာကတည်းက သူမအရိုမခံရတာ တော်တော်ကြာပြီ ခုအရိုက်ခံရတော့မည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ကျော်က အပျိုမလေးလို ခံစားရသည်။ အခုကစပြီးနင်က ငါ့ရဲ့ အကျဉ်းသူဖြစ်သွားပြီ။ နင်အတွက်စည်းကမ်းတွေပြောပြမယ် နင်သေချာမှတ်ထားဟု….ပြောပြီး တင်ပါးကို တစ်ချက်ရိုက်သည်။
နောက်တော့သူက ရွှေစင့်ကို ဘယ်လိုနေရမည် ဘ်ာလို ဝတ်စားဆင်ယင်ကမယ်ကအစ တစ်ချက်ခြင်းပြောသည်။ တစ်ချက်ပြောပြီးတိုင်း တစ်ခါ ရိုက်သည်။ တင်ပါးတွေ ကျိန်းစပ်လာသည်အထိအရိုက်ခံရသည်။ သူ့စည်းကမ်းချက်တွေ ပြောပြီးတော့ မှတ်မိလားလို့မေးသည်။ သူမက မှတ်မိကြောင်းဖြေရသည်။ မင်းမျိုးနွယ်က ကြိမ်ဒဏ်အထပ်ထပ်ထိထားသော ရွှေစင့်ရဲ့ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို လက်ဖဝါးနဲ့ပွတ်သပ်နေသည်။ အရိုက်ခံရတဲ့နေရာတွေက နာကျင်သွားသဖြင့် တွန့်တွန့်သွားသည်။ ထိမြှတဆင့်တတ်ကာ စိုစိစိဖြစ်နေသော အဖုတ်လေးကို ပွတ်သပ်နေသည်။ နောက်စအို ဝကိုလည်း လက်နှင့်ကလိသေးသည်။ ရွှေစင်တစ်ယောက် ထွန့်ထွန့်လူးနေရှာသည်။ နောက်တော့ မင်းမျိုးက ဘောင်းဘီကိုချွတ်ကာ သူ့ရဲဖွားဖက်တော်ကို သူမရဲ့ အဖုတ်ထဲထိုးထည့်လိုက်သည်။ နောက်သူမအပေါ်ထပ်လျှက်ကုန်းလိုက်ပြီး ရင်သားတွေကို အင်္ကျီပေါ်မှပင်ပွတ်သပ်ပေးသည်။အောက်မှလည်း စိတ်တိုင်းကျလိုးစောင့်နေသည်။ ရွှေစင်တစ်အင့်အင့်နဲ့ ညည်းနေရသည်။ ခဏကြာတော့ သူ့စန္ဒပြည့်သွားသည်ထင်သည်။ သူမကို ကြိုးဖြည်ပေးကာထွက်သွားသည်။ သူမလည်းမောဟိုက်နေရာမှရေကို အနိုင်နိုင်ထကာ ရိုးချိုးရသည်။ ပြီးတော့အဝတ်အစားသစ်တွေထုတ်ဝတ်သည်။ သို့သော် ခုဏကပြောသွားသော စည်းကမ်းအရ ပင်တီမဝတ်ရ။ သူမမနညခံချင်သောလည်း မလွန်ဆန်ဝံ့။ကြောက်မိနေသည်လေ။
ထို့ကြောင် ရင်ဖုံးအင်္ကျီရယ် ထဘီရယ် အောက်ခံဘော်လီရယ်သာဝတ်လာသည်။ မကြားခင်မှပက် ညီမဖြစ်သူ ကျောင်းက ပြန်လာပြီး သုံးယောက်သားထမင်းလက်စုံစားကြသည်။မင်းမျိုး ဟန်ဆောင်းကောင်းသည်။ ခုဏက ဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလို အေးအေးဆေးဆေးပင်။ ကျောင်းသာတတ်နေရသည် စိတ်ကမပါ။ အမဖြစ်သူရဲ့ အမျိုးသားဆုံးပြီးကတည်းက အိမ်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းမသိ ။ အရင်လို သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းမရှိသလိုခံစားရသည်။ ကျောင်းမတတ်ချင်တော့သဖြင့် အိမ်ပြန်နားရန် ကျွန်မပစ္စည်းတွေသိမ်းလိုက်သည်။ ငွေစင် အိမ်ပြန်တော့မလို့လား အေးဟ နေရင်းထိုင်ရင်းမူးလာလို့ ကျွန်မပြောပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့သည်။ အိမ်ရောက်တော့ အမြံသော့ခတ်ထားတဲ့ ခြံတံခါးကို သော့ပိုဖြင့်ဖွင့်ကာ အိမ်ပေါ်တတ်ခဲ့သည်။ခြံထဲမှာ ကားမတွေ့သဖြင့် မင်းမျိုးရှိမည်မထင်။မင်းမျိုးအကြောင်းတွေးမိတော့ ကျွန်မရင်ထဲနွေးကနဲ။ ကျိတ်ချစ်ရသူလေ အပေါ်ထပ်တတ်သော မမအခန်းကို တခါးမခေါက်ပဲ ဖွင့်လိုက်သည်။ မြင်လိုက်ရသောမြင်ကွင်းကြောင့် ကျွန်မ မျက်လုံးပြူးသွားသည်။ မမကို သစ်သားကုလားထိုင်တစ်ခုနဲ့ တွဲကာ လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ထားပြီး ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ကားကာ လက်တင်တန်းပေါ်သို့တင်ထားရသည်။ မင်းမျိုးက သူမ ဆီးခုံပေါ်က အမွှေးအမြင်တွေကို စိမ်ပြေနပြေရိတ်နေသည်။ ကျွန်မတွေ့တော့ မင်းမျိုးက ထိုင်နေရာမှထလာသည်။ ကျွန်မကျောက်အားလန့်အားနဲ့ ထိုင်နေရာမှပြေးထွက်လာခဲ့သည်။ အိမ်နဲ့ဝေးရာကို ။
ကျွန်မ ရဲစခန်းရှေ့ရောက်တာ လေးကြိမ်မြောက် သို့သော် အထဲမဝင်ဖြစ်သေး။ ရဲတိုင်မည်ဟု စဉ်းစားလိုက်တိုင်း မင်းမျိုးနွယ်နဲ့ မမရွှေစင်တို့ပုံရိပ်တွေ တလှည့်စီပေါ်လာသည်။ မမကို ကြိုးတွေတုပ်ထားပေမဲ့ မရုန်းကန်နေသဖြင့် လိုလိုလားလားခံယူနေတာ သိသာသည်။ သူမဘာလုပ်သင့်လဲ ￼￼ကလင် ကလင် ￼￼￼ ဖုန်းသံကြောင့် ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ မမဖုန်း။ ကိုင်ကြည့်လိုက်တော့ ဟဲလိုဟူသည့်အသံက မင်းမျိုးနွယ်ရဲ့အသံ မင်းဘယ်မှာလဲ ငွေစင် ကျွန်မရဲစခန်းအရှေ့မှာ…… သူက အဟက်ကနဲရယ်က ဖုန်းချသွားသည်။ ကျွန်မလည်း စိတ်ကိုလျော့ကာအိမ်ပြန်လိုက်သည်။ အိမ်ရောက်တော့သူက ကျွန်မကို ဧည့်ခန်းမှာစောင့်နေသည်။ ရဲတွေ မပါဘူးလား သူက ကျွန်မကို ခနဲ့သလိုမေးသည်။ ကျွန်မခေါင်းခါပြလိုက်မိသည်။ မင်းအခွင့်အရေးရတုန်းတိုင်ခဲ့သင့်တယ်။ငါမင်းကို အပြင်ပေးထွက်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး အဲ့တာဆိုလည်း အိမ်ထဲမှာပဲနေရုံပေါ့……….။ ဘယ်လို…….. ကျွန်မစကားကြောင့်သူက အံသြသွားပုံပြသည်။ ကျွန်မပြုံးလိုက်သည်။ ဟုတ်တယ် ကျွန်မ ကြိုးစားပြီးပြီ မအောင်မြင်ဘူး….. သူက ကျွန်မကို ကြည့်ပြီး ရယ်တယ်။ ပြီးတော့ ကောင်းတယ် မင်းဘဝကိုလဲ ငါမင်းအမလိုပဲသိမ်းပိုက်လိုက်မယ်။ ကျွန်မခေါက်းခါပြလိုက်သည်။ ဘာလို့လဲ……သူကမေးသည်။ မမကိုရှင် အဓ္ဓမသိမ်းပိုက်ရတာလေ။ ကျွန်မက လိုလိုလားလား အသိမ်းပိုက်ခံခဲ့တာ……. ။ ကျွန်မက သူ့ထက်အခွင့်အရေးပို ရသင့်တာပေါ့။
သူက အံသြဟန်နဲ့ မျက်ခုံးပင့်ပြသည်။ မင်းရမှာပါ။ မင်းသာ ငါခိုင်းသမျှလုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့။ လိုက်ခဲ့ သူထွက်သွားရာနောက်ကျွန်မ ထပ်ကျပ်မကွာလိုက်သွားသည်။ ထမင်းစားခန်းမှာ ကျွန်မကို ထမင်းတစ်ပွဲပင်ဆင်စေသည်။ နောက်တော့ အဲ့တာ ရွှေစင်စားဖို့ ။ နောက်နေ့ဆို သူက မင်းရဲ့ အိမ်မွေးကြောင်သာသာပဲရှိမှာ။ ကြောင်တွေ သူသခင်ကို ခင်တွယ်နေအောင် ဘာလုပ်သင့်လဲ မင်းသိတယ်မှတ်လား။ ကျွန်မသူ ဘာဆိုလိုလဲသိပါနယ်ဒါကြောင့် ကျွန်မထမင်းပန်းကန်ထဲ တတွေးအနည်းငယ်ထွေးလိုက်သည်။ သူကကျေနပ်စွာပြုံးသည်။ ထိုပန်းကန်ကို စတိုခန်းထဲ လက်ပြန်ကြိုးအထပ်ထပ်တုပ်ထားတဲ့မမရှေ့ချပေးသည်။ ကိုယ့်အတစ်ယောက်လုံး ခွေးတစ်ကောင်လို အစားစားနေရတာကို ကျွန်မစိတ်ထဲကျေနပ်သလိုဖြစ်မိသည်။မင်းမျိုးက ကျွန်မလက်ကို တွဲကိုင်လိုက်ကာ ရွှေစင်……မနက်ဖြန်ကျရင် နင်ညီမနဲ့ငါ လက်ထပ်တော့မယ် နင်သဘောတူတယ်မှတ်လား……. မမ စားနေရာမှ မျက်လုံးဝိုင်းလေးဖြင့်မော့ကြည့်သည်။ ဘာမှတော့မပြော။ ကျွန်မနဲ့ ကို မျိုးတစ်ဦးမျက်နှာ တစ်ဦးကြည့်ကာ ပြုံးဖြစ်ကြသည်။ မှန်ထဲက ကိုယ့်ပုံကိုယ်ကြည့်ရင်းကျွန်မ သဘောကျနေမိသည်။ မမ မင်္ဂလာဆောင်တုန်းက ဝတ်စုံက ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ တင့်တယ်နေသည်။
မမကို ကြည့်လိုက်တော့ သူတန်ဖိုးထားရသော ပစ္စည်းကိုနှမြောစွာ ကြည့်နေသည်မို့ အမကို အနိုင်ကျင့်ခွင့်ရသော ခလေးငယ်တစ်ယောက်လို ကျွန်မပျော်မိသည်။ ကျွီကနဲ တံခါးဖွင့်သံနဲ့အတူ ကိုမျိုးဝင်လာသည်။ မမက သူ့ကို မြင်တော့ ကိုယ်ကို မတ်မတ်လေးရပ်ကာ လက်နှစ်ဖက်လုံးကို နောက်ပစ်ထားလိုက်သည်။ သူကတော့ မမကို ဂရုစိုက်ဟန်မပြပဲ ကျွန်မလက်ကို ဆွဲကာခေါ်ထုတ်သွားသည်။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တရားရုံးသွားကာ လက်မှတ်ထိုးကြသည်။ ပြီးတော့ လျှောက်သွားသောက်စားကြသည်။ ၇နှနာရီခန့် အိမ်ပြန်ရောက်သည်။ မင်င်္ငလာဦးညကို ဖြတ်သန်းရန် ကိုမျိုးနှင့်ကျွန်မ သာမက မမပါ အိပ်ခန်းထဲရှိနေကြသည်။ ကဲအင်္ကျီတွေချွတ်လိုက်ကြစမယ် ဆိုနော့ မမကော ကျွန်မပါ သူ့အမိန့်ကို နာခံကြသည်။ နှစ်ဦးသားဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်သွားတော့ သူကမမကို ဆိုဖာခုံအရှည်တစ်ခုပေါ်မှာ ခပ်လျော့လျော့လေးမှီထိုင်စေသည်။ ကျွန်မကတော့ မမရဲ့ပေါင်ကြားက လွတ်တဲ့နေရာမှာ ထိုင်ပြီးမမရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှီချလိုက်သည်။ မမက ကျွန်မလက်တွေကို ဘေးဘက်သို့ ခပ်ကားကားမြောက်အောင်ဆွဲယူပြီးချုပ်ထားသည်။ နောက်ခြောထောက်နှစ်ဖက်ကို ကားစေကာ သူမခြေထောက်တွေနဲ့ ဖိပြီးချုပ်ထားပြန်သည်။
ဆိုတော့ကာ ကျွန်မကို ကြိုးမတုပ်ထားပေမဲ့ မမရဲ့ ချုပ်နှောင်မှုမှာ မလူးလွန့်သာပါ။ ထိုအချိန်မှာ ကိုမျိုးဟာ ကြိမ်လုံးတွေထားရာစင်ဘက်ကို လျှောက်သွားနေသည်။ ကျွန်မအတွက် မင်္ဂလာဦးလက်ဆောင်က ကြိမ်လုံးတွေလား ကို….. မဟုတ်ဘူးအဲ့ထက်ပို သဘောကျစရာကောင်းတဲ့ဟာ…… ပြောပြောဆိုဆို သူဗီဒိုထဲက ထုတ်လိုက်တဲ့အရာကြောင့်ကျွန်မ အနည်းငယ်တော့လန်သွားသည်။ သားရေကြာပွတ်ကြီးလေ ဘယ်လိုလဲ သဘောကျတယ်မှတ်လား သူကမထီတရီမေးသည်။ ကျွန်မလိုချင်တယ်………။ အဖြေစကားကို သူက ကျေနပ်စွာပြုံးသည်။ နောက်တော့ ရွှမ်း….ရွှမ်း…..ရွှမ်း…. အား….အ…….အမလေး….. ကိုယ်ပေါ်ကျလာတဲ့ ကြိမ်ချက်တွေကို အတားအဆီးမဲ့ ခံယူနေရသည်။ မတော်တရော်နေရာတွေသွားထိရင် ခံစားမှုက နှိုင်းပြမရ။ မမကိုပါ တစ်ချက်တစ်ချက်ရောထိနေသည်မို့ ညီအမနှစ်ယောက်ရဲ့ အော်သံတွေညံနေသည်။ ရိုက်လို့ဝသွားသောကို မျိုးက ကျွန်မပေါင်ကြားမှာနေရာယူကာ လျှာဖြင့် ကျွန်မအဖုတ်ကို ပြုစုသည်။
ရင်ထဲတရိပ်ရိပ်နဲ့ခံစားနေရသည်။ ကိုယ်က ချုပ်နှောင်ခံထားရသည်မို့မလွတ်မလပ်။ ထို့ကြောင့်ကော့ပျံအောင်ရုန်းကန်နေမိရာ ရွှေစင်က မနည်းထိန်းနေရသည်။ ပြီးလုပြီးခင်အနေအထားမှာ ရပ်တန့်လိုက်သည်။ကိုမျိုးက သူ့အဝတ်တွေကို စိမ်ပြေနပြေချွတ်သည်။ပြီးတော့ ထောင်မတ်နေတဲ့သူ့လီးကို ကျွန်မအဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်သည်။ နာကျင်မှုကြောင့် အော်ဟစ်မိသည်။ သူကမညှာ ထောင်ထနေသော နို့သီးခေါင်စလေးတွေလဲ လက်ညှိုးလက်မနဲ့ ညစ်ကစာသည်။ သူစိတ်တိုင်းကျသည်အထိ ဆက်ဆံလေသည်။ ထိုနေ့ကစပြီး ကျွန်မတို့ညီအမ နှစ်ယောက် ကိုမျိုးထံခစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်မဟာ ကိုမျိုးရဲ့ကျေးကျွန်သာမက မမရဲ့ သခင်မအဖြစ်ပါနေထိုင်တယ် ။ အစက အခတ်အခဲရှိပေမဲ့ နောက်တော့လည်း မမကော ကျွန်မပါနေသားကျသွားတာပဲလေ ………ပြီးပါပြီ။